Gunaanad - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Shan iyo Labaatanaad - Caasimada Online
Home Warar Gunaanad – Taxanaha Maxaabbiistii 77 – Qaybta Shan iyo Labaatanaad
Gunaanad – Taxanaha Maxaabbiistii 77 – Qaybta Shan iyo Labaatanaad
Muqdisho (Caasimada Online) – Waa Qaybta ugu dambeysa ee Taxanaha Maxaabbiistii 77. Waxaan ku soo bandhigayaa tirkoob guud iyo macluumaad kooban.
Mid ka mid ah saraakiishii xabsiga Ethiopia laga soo daayay wuxuu ii sheegay in waraaqaha ICRC ee ka yimid qoysaska Maxaabbiista la keeni jiray xabsiga qiyaastii afrtii biloodba mar. Marka waraaqaha la qeybiyana uu xabsigu noqon jiray shanqar la’aan inta maxbuus waliba uu akhrisanayo xogta qoyskiisa kuna mashquulayo xusuustooda iyo malihiisa.
Mxaabbuus kasta inta aan dalka laga dhoofin waxaa la diyaarinayay waraaqo looga baahan yahay hey’ado kala duwan sida Isbitaal, booliiska, Laanta Socdaalka, Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo qaar kale.
Hey’adaha qaar waxay ahayd in la horgeeyo maxbuuska taas oo kalliftay in aan xabsiga ka soo saarno oo aan ku hayno Saldhigga Booliiska ee Wardhiigleey. Marka aan u tago Saldhigga aniga oo doonaya in aan Maxbuus geeyo hey’ad ama laba, mararka qaar waxay igu dari jireen askari booliis ah.
Waxaan u mahadcelinayaa akhrisatayaasha bloggan siiba inta akhrisatay Taxanahan. Waxaan aad ugu mahad celinayaa inta akhrisay, la wadaagtay saaxiibbadood isla markaasna ka dhiibtay ra’yigooda, ii kordhisay macluumaad, maskaxdeyda ku dhaliyay su’aalo, ama weydiimo ii soo bandhigay aan uga jawaabay. Waan ku cudur daaranayaa inta aan ka jawaabi kari waayay, aan ka ilduufay ama aan ka gaabsaday.